१० कक्षामा पुगिन् करिश्मा,कुन बिषय लाग्दो रहेछ त गाह्रो ? | Rajmarga
१० कक्षामा पुगिन् करिश्मा,कुन बिषय लाग्दो रहेछ त गाह्रो ?
नायिका करिश्मा मानन्धर कक्षा ९ उत्तिर्ण गरेर १० कक्षामा पुगेकी छन् । ८ कक्षादेखि मैतिदेवीमा रहेको त्रिवेणी पब्लिक स्कूलमा पढिरहेकी करिश्मा लगालग पास भैरहेकी छन् । प्रौढ उमेरमा स्कूल जान थालेकी करिश्माले ९ कक्षामा पास गरेकी छिन ।
नेपाली फिल्ममा सदाबहार अभिनेत्रीको रुपमा परिचित हिरोइनलाई सबैभन्दा सजिलो र गाह्रो कुन बिषय लाग्ला ? ‘म्याथ र साइन्स चाहिं अलि गाह्रो लाग्छ’, करिश्माले सुनाइन्, ‘इङ्ग्लिस, अकाउन्ट, सोसल सजिलो छ।’ नेपाली पनि गाह्रो लाग्ने करिश्माले सुनाइन् । उनको मेजर सब्जेट चाहिं अकाउन्ट हो ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली फिल्ममा आवद्ध रहेकी करिश्माले पछिल्लो समय राजनीति र आफ्नो पढाईलाई सँगसँगै लगिरहेकी छिन् । नयाँ शक्ति पार्टीकी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी करिश्मा राष्ट्रिय सभामा समानुपातिकमा उनको नाम थियो । तर उनी सांसद भने भइनन् ।
Previous post: दुर्लभ पाटेबाघ मर्यो , अनुसन्धानका लागि नमूना संकलन
Next post: भारत र चिनबीच युद्ध भए कसले जित्छ ? यस्तो छ अंक गणित